नियुक्त भएको केही घण्टामै किन दिइन् स्विडेनकी प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा ?
स्विडेनकी प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको केही घण्टामै राजीनामा दिनुपरेको छ । बुधबार म्याग्डलेना एन्डरसन स्विडेनको प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएकी थिइन् । तर सत्ता साझेदार गठबन्धन दलले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले राजीनामा दिनु परेको हो ।
म्याग्डालेना एन्डरसनले पदबाट राजीनामा दिएको एक हप्ता नबित्दै पुनस् प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी छिन्। अल्जाजीराका अनुसार, म्याग्डालेन एन्डरसन प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनको बजेट विपक्षीले अस्वीकार गरेपछि राजिनामा दिएकी थिइन् । गठबन्धनमा अति दक्षिणपन्थी पार्टी समेत समावेश थियो । यसअघि, मध्य(वामपन्थी सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीकी नेता म्याग्डालेना एन्डरसन चुनावपछि देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी […]
khasokhas.com 1 महिना पहिले
स्वीडेनकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको केही घण्टामै किन दिइन् राजीनामा ?
बाह्रखरी 1 महिना पहिले
स्विडेनकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीले दिइन् केही घण्टाभित्रै राजीनामा
काठमाडौँ । स्विडेनकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री म्याग्डलेना एन्डर्सनले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । उनले नियुक्त भएको केही घण्टाभित्रै राजीनामा दिएकी हुन् । सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीकी नेतृ समेत रहेकी एन्डर्सनले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको १२ घण्टा नबित्दै पदबाट राजीनामा दिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन् । गठबन्धन सरकारको साझेदार रहेको ग्रिन पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि एन्डर्सनको राजीनामा […]
नियुक्त भएको केही घन्टामा नै स्विडेनकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीले किन दिइन् राजीनामा ?
स्वीडेनकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको १२ घन्टापछि दिइन् राजीनामा
स्वीडेनमा मगडलेना एन्डरसनले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको १२ घन्टापछि राजीनामा दिएकी छिन् । सरकारमा सहभागी दुई मुख्य पार्टी गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गरेपछि एन्डरसनले राजीनामा दिएकी हुन् । तर, केही घन्टाका लागि भए पनि उनी देशकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्न भने सफल भएकी छिन् । ‘गठबन्धमा विभाजन भएपछि पदबाट राजीनामा दिएकी हुँ,’ राजीनमापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एन्डरसनले भनिन् । उनले आफ्नो पार्टी सोसल डेमोक्रयाटिकले आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउने र त्यसपछि आफू पुनः प्रधानमन्त्री हु
प्रथम महिला प्रधानमन्त्री बनेको एक घन्टामै राजीनामा
एजेन्सी, ९ मंसिर । उनी स्वीडेनकी प्रथम प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । तर, नियुक्तिको एक घन्टामै राजीनामा दिइन् । मागडालेना एन्डरसन बुधबार आफ्नो पार्टी सोसियल डेमोक्रयाटको नेता बन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । गठबन्धनको अर्को दल ग्रिन्स पार्टीले बजेट अस्वीकार गर्दै समर्थन फिर्ता लियो । बजेट पारित हुन नसकेपछि एन्डरसनले राजीनामा दिइन् । एन्डरसनले राजीनामा दिएपछि […]